Watson anoita sei? - Motio
by John BoyerApr 13, 2022Cognos Analytics0 mashoko
IBM Cognos Analytics yakatemwa nezita reWatson muvhezheni 11.2.1. Zita rake rakazara ikozvino IBM Cognos Analytics ine Watson 11.2.1, yaimbozivikanwa seIBM Cognos Analytics. Asi uyu Watson aripi chaizvo uye anoitei?
Muchidimbu, Watson anounza AI-yakapinza self-sevhisi kugona. Yako nyowani "Clippy", chaiyo AI Mubatsiri, inopa nhungamiro mukugadzirira data, kuongorora, uye kugadzira mishumo. Watson Moments inopinda mukati kana ichifunga kuti ine chimwe chinhu chinobatsira kupa pamusoro pekuongorora kwayo data. Cognos Analytics neWatson inopa chiitiko chinotungamirwa chinodudzira chinangwa chesangano uye chinovatsigira nenzira inokurudzirwa, inotungamira mukugadzirisa kwekuita sarudzo.
Sangana neWatson mutsva
Watson, chiremba wemanyepo akagadzirwa naDr. Arthur Connan Doyle, akaridza foil kumutikitivha Sherlock Holmes. Watson, uyo akanga akadzidza uye akachenjera, aiwanzocherechedza zviri pachena uye aibvunza mibvunzo pamusoro pezvinoita sezvisingawirirani. Masimba ake ekubvisa, zvisinei, aive asingaenzaniswi neaHolmes.
Haasi iye Watson watiri kutaura nezvake. Watson iri zvakare IBM's AI (artificial intelligence) chirongwa chakatumidzwa zita remuvambi wayo. Watson akaunzwa pasirese muna 2011 semukwikwidzi weJeopardy. Saka, pamidzi yayo, Watson icomputer system inogona kubvunzwa uye inopindura nemutauro wechisikigo. Kubva panguva iyoyo, iyo Watson label yakashandiswa neIBM kune akati wandei maitiro ane chekuita nekudzidza kwemuchina uye nezvainodaidza kuti AI.
IBM inoti, "IBM Watson iAI yebhizinesi. Watson anobatsira masangano kufanotaura zvichazoitika, otomatiki maitiro akaomarara, uye nekugadzirisa nguva yevashandi. " Kunyatsotaura, Artificial Intelligence icomputer system inogona kutevedzera kufunga kwevanhu kana kuziva. Zvizhinji zvezvinopfuura zveAI nhasi ndiko kugadzirisa matambudziko, Natural Language Processing (NLP) kana Machine Kudzidza (ML).
IBM ine akati wandei akasiyana software mafomu yakapinzwa nekugona kwaWatson kweKugadzira Mutauro Wechisikigo, kutsvaga nekuita sarudzo. Uyu ndiWatson sechatbot uchishandisa NLP. Iyi inzvimbo imwe umo Watson anokunda.
Izvo zvaimbozivikanwa seCognos BI, ndizvo ikozvino yakanyorwa IBM Cognos Analytics ine Watson 11.2.1, yaimbozivikanwa seIBM Cognos Analytics.
Sepfupiso yezvisinganzwisisike zvinonzi ICAW11.2.1FKAICA,
Cognos Analytics neWatson imhinduro yehungwaru yebhizinesi inopa vashandisi simba neAI-yakapinza self-sevhisi kugona. Iyo inomhanyisa kugadzirira data, kuongorora, uye kugadzira mishumo. Cognos Analytics neWatson inoita kuti zvive nyore kuona data uye kugovana zvinogoneka mukati mesangano rako rese kusimudzira sarudzo dzinotungamirwa nedata. Kugona kwayo kunoita kuti vashandisi vaderedze kana kubvisa kupindira kweIT kune akawanda mabasa apfuura, ichipa mamwe ega-sevhisi sarudzo, kufambisira mberi hunyanzvi hwekuongorora hwebhizinesi, uye kugonesa masangano kutora ruzivo zvakanyanya.
Cognos Analytics neWatson inopa chiitiko chinotungamirwa chinodudzira chinangwa chesangano uye chinovatsigira nenzira inokurudzirwa, inotungamira mukugadzirisa kwekuita sarudzo. Pamusoro pezvo, Cognos Analytics ine Watson inogona kuiswa panzvimbo, mugore, kana zvese.
Ndedzipi idzi "AI-yakapinza self-service kugona?" Chii chinonzi Watson chikamu? Chikamu cheWatson ndicho "chiitiko chinotungamirirwa," "[kududzira] chinangwa chesangano," uye kupa "nzira inokurudzirwa." Uku ndiko kutanga kweAI - synthesizing data uye kuita kurudziro.
Chii chinonzi Watson uye chii chisiri? Watson anotangira kupi uye chigadzirwa chaimbozivikanwa seIBM Cognos Analytics chinopera? Kutaura chokwadi, zvakaoma kutaura. Cognos Analytics "yakapinzwa" naWatson. Haisi bhaudhi-on kana chinhu chitsva chemenyu. Iko hakuna bhatani reWatson. IBM iri kutaura kuti Cognos Analytics, ikozvino yakanzi Watson-powered, inobatsira kubva pauzivi hwekugadzira uye kudzidza kwesangano uko mamwe mabhizinesi ari mukati meIBM anga achibuda.
Izvo zviri kutaurwa, Watson Studio - chigadzirwa chakasiyana chine rezinesi - chakabatanidzwa, kuitira kuti, kana changogadziriswa, iwe zvino unokwanisa kunyudza zvinyorwa kubva kuWatson Studio kuita mishumo uye dashboard. Izvi zvinokutendera kuti ukwidziridze simba reML, SPSS Modeler, uye AutoAI yemhando yepamusoro analytics uye data sainzi.
MuCognos Analytics neWatson, iwe unowana Watson pesvedzero mune AI Mubatsiri izvo zvinokutendera kuti ubvunze mibvunzo uye uwane miono mumutauro wechisikigo. Mubatsiri weAI inoshandisa NLM kutsanangudza mitsara, kusanganisira girama, zviperengo uye zviperengo. Ndakaona kuti, seAmazon's Alexa uye Apple's Siri, zvinofanirwa kunyora kana dzimwe nguva kudzokorora mubvunzo wako kuti ubatanidze yakakodzera mamiriro. Zvimwe zvezviito izvo Mubatsiri anogona kukubatsira nazvo zvinosanganisira:
Ratidza mibvunzo - inopa rondedzero yemibvunzo kuburikidza neYakasikwa Mutauro Mubvunzo waunogona kubvunza
Wona masosi edata - inoratidza masosi edata iwe aunokwanisa kuwana
Ratidza kunobva data (column) details
Ratidza column influencers - inoratidza minda inopesvedzera mhedzisiro yekoramu yekutanga
Gadzira chati kana yekuona - inokurudzira yakakodzera chati kana yekuona kune bests inomiririra makoramu maviri, semuenzaniso
Gadzira dashboard - yakapihwa sosi yedata, inoita izvo chaizvo
Anotates dashboards kuburikidza Natural Mutauro Generation
Ehe, zvimwe zveizvi zvaive zviripo muCognos Analytics 11.1.0, asi yakawedzera mberi mukati 11.2.0.
Watson inoshandiswawo kuseri kwezviitiko mu "Kudzidza Zvishandiso" paCognos Analytics 11.2.1 peji repamba iro rinobatsira kutsvaga midziyo muIBM uye b.roader community.
Mukuburitswa kwe11.2.0, "Watson Moments" yakaita debut yayo. Watson Moments zvinhu zvitsva zvakawanikwa mudata iro Watson “anofunga” raungafarire. Nemamwe mazwi, paunenge uchigadzira dashboard uchishandisa Mubatsiri, inogona kuona kuti pane imwe nzvimbo ine hukama kune iyo yawakabvunza nezvayo. Inogona kuzopa ratidziro yakakodzera ichienzanisa minda miviri. Izvi zvinoita sekunge kuri kutanga kuita uye zvinoita sekunge kuchave nekumwe budiriro munzvimbo ino munguva pfupi iri kutevera.
Isu tinoonawo Watson muAI-yakabatsirwa data modules ine hungwaru hwekugadzirisa data maficha. Watson inobatsira neiyo yakakosha nhanho yekutanga yekuchenesa data. Algorithms inokubatsira iwe kuwana ane hukama matafura uye ndeapi matafura anogona kubatanidzwa otomatiki.
IBM inoti kuti chikonzero nei tichiona Watson mumusoro wesoftware pamwe nezvimiro ndechekuti "iyo IBM Watson branding inobatsira kuburitsa kuti chimwe chinhu chakakosha chakaitwa neAI."
Cognos Analytics naWatson iri kukwereta kubva kuzvikwata zvekutsvagisa uye IBM Watson Services - pfungwa, kana isiri kodhi. IBM inotanga Watson cognitive computing mumavhoriyamu manomwe neBuilding Cognitive Applications ine IBM Watson Services Redbooks series. Bhuku 1: Kutanga inopa yakanakisa sumo kuWatson uye cognitive computing. Vhoriyamu yekutanga inopa sumo inoverengwa kwazvo kunhoroondo, pfungwa dzekutanga uye maitiro ecognitive computing.
Chii chinonzi Watson?
Kuti unzwisise kuti Watson chii, zvakakosha kuti utarise maitiro ayo IBM anoti kune AI uye yekuziva masisitimu.
Wedzera kugona kwevanhu. Vanhu vakanaka pakufunga zvakadzama uye kugadzirisa matambudziko akaoma kunzwisisa; makomputa ari nani pakuverenga, kugadzira, uye kugadzirisa huwandu hukuru hwe data.
Kudyidzana kwakasikwa. Saka, kutarisa kwekuzivikanwa uye kugadzirisa mutauro wechisikigo,
Machine kudzidza. Nekuwedzera data, fungidziro, sarudzo kana kurudziro zvichavandudzwa.
Chinja nekufamba kwenguva. Zvakafanana neML iri pamusoro, kugadzirisa kunomiririra kuvandudza kurudziro zvichibva pane mhinduro loop yekudyidzana.
Mukutaura nezve Artificial Intelligence, zvakaoma kusaita anthropomorphize tekinoroji. Icho chinangwa chekuvandudza hurongwa hwekuziva hunokwanisa kunzwisisa, kufunga, kudzidza nekudyidzana. Iyi ndiyo nzira yakataurwa yeIBM. Tarisira kuti IBM iunze zvimwe zvezvikwanisiro izvi kuCognos Analytics ikozvino yapfeka Watson brand.
Hazvina kudaro zvepakutanga
Takatanga chinyorwa ichi tichitaura nezve deductive reasoning. Deductive kufunga iri "kana-izvi-zvino-izvo" pfungwa isina kusavimbika. "Kufunga kwakanaka, zvisinei, kunobvumira Sherlock [Holmes] kuti awedzere kubva kune ruzivo rwakaonekwa kuitira kuti asvike pamhedziso nezve zviitiko zvisina kucherechedzwa ... kukwanisa kubata."
Tichifunga hunyanzvi hwaIBM Watson pakufungidzira uye hupfumi hwezvinyorwa, ndinofunga kuti "Sherlock" rinogona kunge raive zita rakakodzera.
Business AnalyticsBhizinesi NjereCognos Analytics
Cognos Analytics uye Planning Analytics Pasi Peiyo Roof IBM ichangobva kuzivisa kuti Cognos Analytics uye Planning Analytics yave pasi pedenga remba. Tine mubvunzo mumwechete - Chii chakavatorera nguva yakareba kudaro? Kune akati wandei mabhenefiti ari pachena ekubatanidza ...
Cognos AnalyticsNdiwedzere FactoryUpgradesKuvandudza Cognos
Iwe Unoziva iyo yeCognos Kusimudzira Yakanakisa Maitiro?
Kwemakore Motio, Inc. yakagadzira "Best Practices" yakatenderedza Cognos kusimudzira. Isu takagadzira izvi nekuita pamusoro pe500 kuita uye kuteerera kune izvo vatengi vedu vaiti. Kana iwe uri mumwe wevanopfuura mazana matanhatu vanhu vakapinda kune mumwe wedu ...
Cognos AnalyticsCognos PerformanceNdiwedzere Factory
A blog naJohn Boyer naMike Norris. Nhanganyaya Zvakakosha kuve nekwaniso yeCognos Auditing inoshanda kuti uzive uye unzwisise mashandisirwo eCognos nenharaunda yako yevashandisi uye kubatsira kupindura mibvunzo seiyi: Ndiani arikushandisa sisitimu? Ndeapi mashumo ivo ...
John Boyer | Dai 17, 2021 | 0